Ilay saka volondavenona | Noti saka
Mistery be ny saka. Ny biby tia olona sasany, na dia maditra aza indraindray. Olona an-tapitrisany eran'izao tontolo izao no tian'izy ireo, ary maro no miaina miaraka amin'ny fianakavian'olombelona. Misy loko maro: fotsy, mainty, volomboasary, bicolor, tricolor, ... ary volondavenona.
Ny saka volondavenona dia biby iray izay manintona ny saina bebe kokoa. Ny antony? Tsy mazava izany, saingy azo antoka fa manana palitao miloko mainty izy mba hampiavaka ny mason'izy ireo, na mavo na maitso. Ny valiny dia fijery mahavariana izay mahavoa ny fonao marina.
1 Saka miteraka volondavenona
1.3 Manga Rosiana
1.5 Egyptianina Mau
1.6 Shorthair atsinanana
2 Inona ny anarana apetrako?
2.1 Anaran'ny saka saka fotsy
2.2 Anaran'ny saka saka fotsy
Saka miteraka volondavenona
Misy karazany maro ny saka volondavenona, ary izy ireo dia ny Angora, ny Persiana, ny Blue Blue, ny Carthusian, ny Egyptianina, ny Shorthair atsinanana ary, mazava ho azy, ny Common European. Andao jerentsika tsirairay izy ireo hahafantatra azy ireo bebe kokoa:
Ny teratany Angora tiorka dia teratany, araka ny anarany, avy any Torkia. Izy io dia iray amin'ireo tranainy indrindra, ary mbola mijanona tsara mandraka androany. Mampiavaka azy ny fananana volo lava, vatana fanatanjahan-tena sy kanto. Ny habeny dia antonony, satria afaka milanja manodidina ny 6kg.
Milamina milamina izany, noho izany mety ho an'ny fianakaviana kely izany, ary na dia ho an'ny be antitra azaSatria ny palitaony dia iray amin'ireo izay tsy azonao hajanona intsony ny fikolokoloana, ary ny saka fotsy Angora miloko dia iray na roa isan'andro fotsiny.
Ny karazana saka persiana dia vokatry ny zanak'olombelona. Hatramin'ny niandohany ho toy ny karazany, tamin'ny taona 1800, ny mpiompy dia nanandrana nanao endrika endrika misimisy kokoa, nefa tsy nanary na dia kely aza ny hatsarany. Miaraka amin'ny lanjan'ny 7kg, lava volo landy izy.
Ny Persiana dia nonina voahodidin'ny olona ambony hatrany, ka nahatonga azy io ho saka mety indrindra ho an'ny fianakaviana izay tia mankafy ny fotoana fialan-tsasatra ananany. Ny saka persiana volondavenona dia tia ny eo amin'ny fandriana tontolo androNa dia eny aza, zava-dehibe ny fanaovana fanatanjahan-tena kely isan'andro mba tsy handanjana kilao fanampiny.
Ny karazany Blue Blue dia avy any Russia, mazava ho azy. Mediana ny habeny, milanja 5kg, ary miloko volo tena tsara: volondavenona manga. Ny volon'izy ireo, eny, mety ho fohy na lava. Manana vatana hozatra izy, manana maso maitso lehibe.
Ity dia biby izay hankafizinao ny hodidinin'ny olon-tianao foana, satria tena be fitiavana izy io. Tiany ny mandany fotoana hilalao amin'ny ankizy sy / na ny olon-dehibe. Plus, tsy mila fikarakarana manokana, ankoatry ny fitiavana be dia be course.
Ny karazam-saka Carthusian (na Chartreux) dia teratany Torkia sy Iran, na dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX aza dia nanjary fahita tany Frantsa izany. Izy io koa dia iray amin'ireo karazana tranainy indrindra fantatra. Mampiavaka azy ny fananana a volo fohy volondavenona sy maso maitso izay miavaka amin'ny firazanana hafa. Ny lanjany dia 7kg.
Mampihomehy sy mahafinaritra ny toetrany. Tiany ny manao ratsy, nefa koa manome sy mandray fitiavana. Raha ny marina, raha vao manomboka purring ... sarotra ho azy ny mijanona. Raha ny fanazavana, tokony ho fantatrao fa mpihaza teraka izy, noho izany tena ilaina ny milalao miaraka aminy isan'andro ho anao manao fanatanjahan-tena.
Ny karazany Egyptianina Mau dia avy any amin'ny Nile Country, Egypt. Io ilay biby notehirizin'ny Egyptianina taloha, ary ilay namboarin'izy ireo tamin'ny sary hosodoko. Izy io dia miavaka amin'ny fananana palitao misy teboka maizina be ao ambadiky ny hazavana, ka izany no antony itondrana azy ho saka saka.
Lava, salantsalany ny vatana, milanja tsy mihoatra ny 5kg. Ilay sakafom-boaloboka volondavenona dia tena mahaleo tena sy manan-tsaina.
Ny karazany atsinanana volo dia nanomboka novokarina tany Amerika tamin'ny tapaky ny taona 70, na dia efa nisy aza teo aloha, tany Thailandy, izay niandohany. Miaraka amin'ny habe antonony, 5,5kg ny lanjany, manana ny fohy volo izay mety hatramin'ny 26 loko, toy ny crème, fotsy na fotsy.
Ny saka shorthair atsinanana no ho mpiara-milalao tonga lafatra an'ny mpianakavy rehetra. Omeo kilalao izy, ary mankafy mijery azy milalao.
Ny karazany iraisana eropeana dia ny karazana saka an-dalambe, izay antenaina fa ho hitantsika fa voakarakara tsara any amin'ny toeram-pialofana biby na Protectoras. Ireo saka ireto dia nanana fotoana ratsy nandritra ny tantara, ka nenjehina sy nodorana noho ny finoana fa izy ireo no mpampita ny areti-mandringana. Soa ihany fa miova ny fotoana ary ankehitriny dia mihamaro ny olona mipetraka amin'ny trano tsara.
Raha miresaka loko isika dia misy mainty, tabby, voasary, ... ary mazava ho azy, volondavenona. Izy ireo dia salantsalany amin'ny habeny, miaraka amin'ny lanja farany ambony 6-7kg, miaraka amin'ny vatana fanatanjahan-tena sy matanjaka, izay atambatra amina toetra milalao sy be fitiavana. Ny iraisana eropeana mety ho tena ara-tsosialy, raha mbola mifanerasera amin'ny mbola kely (2-3 volana). Ankoatr'izay dia tsy manana aretina lehibe izy, mihoatra ireo izay mety misy saka hafa, toy ny sery na gripa.
Inona ny anarana apetrako?
Sahy miaina miaraka amin'ny saka volondavenona ve ianao? Raha izany dia tsy mora ny misafidy anarana ho azy, koa avelao izahay hanampy anao. Eto ianao manana iray Lisitry ny anarana, ho an'ny lahy sy ny vavy:
Anaran'ny saka saka fotsy
Hatreto dia ny saka saka volondavenona manokana. Inona ny hevitrao? Izy ireo dia biby manintona izay mitady zavatra tokana: mahatsapa fa tiana ary tena anisan'ny fianakaviana izy ireo. Amin'izay mba, amin'ny faharetana sy ny fitiavana dia ho hitanao ao amin'ny saka volondavenona, ilay namana volom-borona tsara indrindra,
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Ilay saka fotsy
Bonze dia hoy izy:
Nanonofy aho, volana vitsivitsy lasa izay, izay nahitako ny tenako niaraka tamin'ny saka volondavenona tao upa .. fanontaniana izay noraisiko dimy andro lasa izay, roa volana sy tapany .. fitiavana madio amin'ny endrika saka io .. Faly aho.
Valiny tamin'i Bonzo
Mabel rodriguez dia hoy izy:
Ny nofiko dia ny hanana saka volondavenona foana, saingy tsy nanao zavatra hitadiavana iray mihitsy aho, tamin'ity taona ity, tany am-piandohana, namoaka doka iray ny namana iray izay nanolotra zanany vavy 3 volondavenona izy, saingy avy any amin'ny tanàna hafa izy, hoy izy. mbola tena kely dia kely ary niandry ny fanalana zaza izy ireo, ny zava-misy dia rehefa lasa naka ny sakafoko aho dia efa nanana anarana ho azy izy, nomeny olon-kafa izy ireo, very fotoana, vola ary ambonin'izany rehetra izany dia naveriny aho amin'ny fo torotoro sy tanana foana.
Mahagaga rehefa afaka tapa-bolana dia nisy olona nahita zanak'ondry volondavenona nilaozana ary ny zaobaviko izay nahalala ny tantarako nizara ilay boky, dia nataoko ihany ny zava-drehetra hitady azy, tao an-tanànako ilay saka ary sarotra tamiko koa ny naka azy, satria niseho ny tompony ary te-hitondra azy ireo any amin'ny toeram-piompiana izy ireo ary avelao any izy satria tsy azon'izy ireo izy. Nandany telo andro tamin'ny resadresaka lahatra aho fa izaho no manana an'i Simona, ary tena faly izy miaraka amin'i izaho. Ary ny tena marina dia andriambavy izao ity andriambavy ity, manana sakafo tsara, tafo, fandriana mahafinaritra, vaksininy, vitamina, fitsidihany ny mpitsabo biby ary kilalao maro. 2 volana izahay no niaraka ary tianay ny tsirairay !!! fa fantaro hoe: ……. Telo herinandro lasa izay dia voan'ny allergy matotra aho, izay nahazo ahy tena ratsy, ary na dia tsy nesorina aza ny fanafody, ary nilaza tamiko izy ireo fa tokony hialako ny sakafoko, ary tsy hitako izay hatao, don 'Tsy te-hanao izany aho, nanao fifamatorana mafy taminy, ary tena manampy ahy amin'ny fahaketrako noho ny fahafatesan'ny reniko. Ankoatr'izay dia nofinofiko foana ny hanana zanak'alika mahafatifaty toa azy.! Manao??? helpaaaaaaaaaaa (sniffff, sniffff)
Valiny tamin'i Mabel Rodriguez
Tsy mamporisika ny hanary azy aho.
Afaka miaina miaraka amin'ny allergy ny saka, fa tsy maintsy manisy fanovana vitsivitsy ianao, toy ny tsy avelanao hatory miaraka aminy ohatra, na hamafana matetika kokoa ianao.
Azonao atao ihany koa ny mandeha any amin'ny fivarotana famatsian-biby ary mangataka shampoo na crème mba hampihenana ny dander amin'ny saka. Any Espana dia misy iray izay mandeha tsara, avy any Bayer, ary antsoina hoe Vetriderm.
Ana Rose dia hoy izy:
Salama, novakiako ny lahatsoratra iray momba ny allergy izay mahatonga antsika amin'ireto biby kely ireto, toa tsy dia zatra miaina miaraka amin'izy ireo isika, fa rehefa mandeha ny fotoana dia resaka fahazarana izany, arakaraka ny andanianao fotoana anaovana azy dia hifanaraka ianao , ary noho izany dia manamafy izany aho satria izao no zavatra niainako: tsy tiako ny saka na ny alika, nilaza aho fa tsy afaka mitahiry an'ireto biby ireto ianao, ankoatr'izay tsy tiako, biby fiompy kely 2 ny biby fiompiko, mandra-indray andro dia totozy kely vitsivitsy nankany amin'ny trano fonenana, fantatro fa Andriamatoa mpiambina iray dia nanana saka iray rehefa nandalo izy, ary nampindraminy ahy, tamin'io fotoana io dia naveriko tany aminy izany satria, araka ny nolazaiko, tsy tiako izy ireo, tamin'ity indray mitoraka ity dia nampindraminy ahy ilay zanaka nindraminy taminy, rehefa lasa aho namerina azy tany aminy dia nilaza tamiko izy hoe: hitako fa tena tsara aminao izy, mihoatra noho izany, efa zatra nijanona niaraka taminy ho azy izy. rehefa elaela kokoa, dia any ambany any no manelingelina ny olona hafa mandany ny fotoanany hanao ratsy azy ireo dia miaina manintona ny saiko tionin'ny saka. Nolazaiko azy fa tsy maninona, saingy tsy azoko antoka ny fanapahan-kevitra noterena fa hiala aho. Amin'izao fotoana izao io biby kely io dia nangalatra ny ampahany tamin'ny foko ary mpikambana iray amin'ny fianakaviako ankehitriny. Haaa raiso loratadine amin'ny andro voalohany, efa ampahany amin'ny fiainako io
Valiny tamin'i Ana Rosa
Liz serrano dia hoy izy:
Salama manana zanak'ondry fotsy aho fa tsy manavaka ny taranany ... Ny endriny dia mitovy amin'ny an'ny tatsinanana manana volo fohy fa feno volondavenona tanteraka izy
Valiny tamin'i Liz Serrano
Mety ho a manga rosiana. Tsindrio ny rohy dia ho hitanao ny rakitrao 🙂
Te hahafanta-javatra momba ny saka mainty